150 Askari oo ka soo goostay Somaliland oo lagu soo haweeyay degmada Ceelbuh (dhegayso | daawo) – Radio Daljir
150 Askari oo ka soo goostay Somaliland oo lagu soo haweeyay degmada Ceelbuh (dhegayso | daawo)
Oktoobar 13, 2019 8:39 b 1
Ciidamo gaaraya 150 askari oo ka tirsanaa maamulka Soomaaliland ayaa maanta ku soo biiray ciidamada difaaca Puntland. Ciidamadaan oo wata 7 gaari oo ah nooca teknikada dagaalka ah ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey degmada Ceelbuh ee gobolka Sanaag.
soodhaweynta ciidamada waxaa ka qaybqaatay maamulka gobolka, kan degmada, iyo saarkiisha amniga Puntland ee Gobolka Sanaag.
Guutadan oo ah guutadii 93aad ayaa ku soo biirtay ciidamada Puntland, kana soo goostay maamulka Soomaaliland ee Hargeysa.
Cali Xuseen Soomaali, Guddoomiyaha Gobolka Sanaag, ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyay Radio Daljir waxa uu ku sheegay in ciidamadan ay iskood go’aanka u lahaayeen, ugana soo goosteen maamulka Somaliland.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 482 Wararka 21457
Jariifka xeebaha Puntland iyo cabashada kaluumaystada (dhegayso)
Baarlamaanka Soomaaliya oo diyaarinaya Mooshin ka dhan ah ciidamada kenya
Mustafa Noor 12 months ago
Ceel maha degmo ee waa magaalo ka tirsan degmada badhan.